diary | Ankapobeny
Tiako toy ny jiro
-Tiako ianao. Tiako toy ny jiro. Andro aho mila anao, alina aho mitady anao, vao mifoha ary aho dia ianao no iriko -Izany tsy tianao aho, Fa tsy mba hiara-dalana mazava isika. -Tsy izany re ramatoa. Ny findaiko anie ao ihany. Izay miantso ahy aza tsy hitako, Raha...
Ny jesuischarlie sy ny Fahalalahana ara-pivavahana.
Naresaka dia naresaka ny fanafihana ny gazety Charlie Hebdo tao frantsa sy ny hetsika jesuischarlie nanaraka azy. Anisan’ny niteraka ady hevitra tamin’ny maro ny filazana fa manevateva ny fivavahan’ny hafa hoe ity gazety ity. Voalaza mihintsy...
Ianao, Ilay sarotra afoy, Ny foko anie voarohy, Ny tanako fihino. Ianao, Ilay tsy ho adino, Fitia lalim-paka, Fitia nahazo laka. Ianao, Tokin’ny maraina, Fitia mitondra aina, Mameno izato androko. Ianao, Mila tsy ho andriko, Andrandraiko hariva,...
Tiako ianao amin'ny SMS
Mba lasa saina aho hoe ahoana tokoa moa raha mba ny sms no ilazana fitiavana saingy tsy hionona amin'ny jtm sy ny tiknao fotsiny fa mba atao lavalava? Ampiasaina daholo ny sms 5 n'ny airtel? SMS 1: Ny itiavako anao toy ny volana, fenomanana:soa sady kanto, ...
Raha hifidy izaho rahampitso Dia ianao no hofidiko Ka io na bileta inika Ny safidiko efa vita Efa fantatrao tsianjery Fa ianao ataoko "Eny" Raha ho anao ilay fitia Tsy mba haiko atao "Tsia". Na oviana atao ny fifidianana Na ahemotra ... foanana Tena...